musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Spain Kuputsa Nhau » Dare reSpain Rinoramba Nightclub COVID Pass Mandate
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • nhau • Kutarisirwa • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Dare reSpain Rinoramba Nightclub Mask Mandate
Dare repamusoro reAndalusia rinofunga kuti mapasipoti ehutano anosungirwa kushanyira nzvimbo dzemukati mehusiku kuve nerusarura uye nekutyora kodzero dzevagari vemo.
Ronga kuita 'COVID-19 mapasipoti' anosungirwa kushanyira makirabhu ehusiku akapfurwa nedare.
Chirongwa chakaipa chakaziviswa neMuvhuro.
Iyo hurongwa hwaizoda EU Dhijitari COVID Chitupa, isina kunaka PCR bvunzo, kana isina kunaka antibody bvunzo yekushanyira chero husiku husiku nzvimbo muAndalusia.
Dare repamusoro reJustice reAndalusia (TSJA) rakaramba hurongwa hwekupokana hwaida kuita kuti mapasipoti eCODV-19 asungirwe kushanyira nzvimbo dzese dzehusiku.
Dare repamusoro mudunhu rekumaodzanyemba kweSpain rakatonga kuti zvinopesana nechikumbiro chakayangiswa nehurumende ye Andalusia kutanga kwesvondo rino. Kugadzira mapasipoti ehutano anosungirwa kushanyira nzvimbo dzehusiku dzekunze kwakanzi kusarura uye kutyora kodzero dzevagari vemo.
Iyo yakaipa-yakashata hurongwa yakaziviswa nemutungamiriri wehurumende yedunhu, Juanma Moreno, kudzoka neMuvhuro. Sekureva kwaMoreno, EU Dhijitari COVID Chitupa, isina kunaka PCR bvunzo, kana isina kunaka antibody bvunzo yaizodikanwa kushanyira chero husiku husiku nzvimbo muAndalusia.
Nepo chiyero ichi chaitarisirwa kuzadzikiswa nekukurumidza seChina, chakamiswa chingori zuva mushure mekuzivisa kwekutanga. Chirongwa ichi chakaendeswa kuti chiongororwe kuTSJA, kuti iwane "kuchengetedzeka kwepamutemo" kusati kwateedzerwa, sekureva kwaElias Bendodo, mubatsiri mukuru kumutungamiri wenyika. Mutongo wedare wekutonga unoreva kuti hauzotanga kushanda zvachose.
Pakati pechirwere ichi, Spain yakanyoresa huwandu hwemamiriyoni e4.57 emamiriyoni eCovid-19 uye vakafa vangangoita zviuru makumi masere nezviviri kubva Chishanu. Nekudaro, huwandu hwehutachiona huri kudonha sezvo nyika ichiita senge yapfuura iyo yepamusoro yeinonyanya kutapukira mutauriro weDelta.
Mwedzi wapera, Dare reConstitutional Court reSpain rakapa mutongo wekuti danho rakasimba rekukiya - rakaburitswa nehurumende yepakati panguva yekutanga kwedenda muna2020 - raive risiriwo mubumbiro remitemo.